Zvinokosha Sei misoro nokuda SEO?
Gumiguru 24, 2017 0 Comments
Hwakanangepi Tags ari munhu Tags rinoshandiswa kuti vakananga zvisikwa. Chinonyanya kukosha Tag iri <H1> uye pashure inoburuka imwe akanyatsorongwa yakaita <H2>,<h3> kuti <H6>. Tinofanira chete kuva kunyora this post. Chikonzero pane mibvunzo yakawanda uye zvido pamusoro misoro uye ivo kukosha. Vazhinji nguva mushandisi chaizvoizvo vasingazivi kuchinja vakananga setup website. Saka pane nzira mbiri sei izvi Tags anogona mamiriro website yako. Classic HTML chete dzinofanira kuva mumwe <H1> Tag Read more [...]
More, nhau, SEO
pamusoro 20+ High Kuzvichenjerera CPC Keywords kuti Google AdSense mu 2017
Gumiguru 11, 2017 0 Comments
Google Adsense Google Adsense ndiko kuri monetizing network kuti vaunze mari kubva Blog yako kana Website. Kana nzvimbo yako ane motokari yakanaka kupfuura iwe kuwana zvakanaka mari nokushandisa Google Adsense CPC mazvi kushandisa mapikicha. Google Adsense hwakavakirwa mu 2003 uye anova akakurumbira zvikuru uye vaifarira monetizing Network. Hazvina AD kushumira algorithm mabasa pamusoro mashandiro ose mazwi akadzama kuti chiri mapikicha. Regai nditsanangure ichi kwamuri. Saka kana uine Blog kana Website namagwatidziro kuti chine chokuita dandemutande Read more [...]
mujeer Gunyana 14, 2017 0 Comments
SEO, dingindira & Bairira
mujeer Gunyana 1, 2017 0 Comments
KEYWORD DENSITY The keyword has to work your website to rank in google, don't forget to Google webmaster tool, you can do by yourself learn our website to give the best ideas with sharing step by step knowledge. Keyword Density Tool - An online tool to Calculate Keyword Density of a webpage. https://t.co/bCC9vXXMKe pic.twitter.com/jDS3mGFyxH — Wikiwon (@ Wikiwon2) Gunyana 1, 2017 This tool will crawl the given URL, extract text as a search engine would, remove common Read more [...]